ဗီဒီယိုကိုပိုပြီးမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Valéry Giscard d'Estaing နှင့်Stéphane Bern တို့နှင့်အတူ Laurent Gerra ၏အကောင်းဆုံး
စနေနေ့တိုင်းလိုပဲဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက်၊ စနေနေ့၊ Valéry Giscard d'Estaing နှင့်Stéphane Bern တို့၏ပုံသက်သေဖြင့် Laurent Gerra ၏အကောင်းဆုံးကိုရှာပါ။ ဤဗီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=eXtuVnQ29r4M... တွင်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်။
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်မနက် ၆း၃၀ နာရီ - ဗီဒီယို
RTL ၏သတင်းစာကို RTL ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ တွင် RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကို https://www.youtube.com/watch?v=v29xCA2020ur3dw တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်
၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ည ၆ နာရီသတင်းစာ - ဗီဒီယို
RTL ၏သတင်းစာကို RTL ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ တွင် RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ ဤဗွီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=pE29rkRGbo2020 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
Olivier က "နိုင်ငံရေးအတွက်အချို့သောသူများအတွက်ခက်ခဲသော coronavirus နှင့်မကစားပါနှင့် ... "
အယ်ဒီတာ - အစိုးရသည်ပြည်သူလူထုကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်နှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ၏အစကိုတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်နှင့်အမျှအချို့သည်ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်တရား ၀ င်စကားလုံးအားအရည်အချင်းမပြည့်မှီသောသူများအဖြစ်ကစားကြသည်။
Oise ရှိ coronavirus လူနာတစ် ဦး အားကုသပေးခဲ့သည့်အထွေထွေဆရာဝန်တစ် ဦး သည်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ရန်အစိုးရ၏မဟာဗျူဟာအပေါ်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။
5G - ပြင်သစ်တွင် Huawei စက်ရုံတည်ထောင်မည် - ဗီဒီယို
Huawei သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်စက်ရုံတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး 5G စျေးကွက်တွင်နေရာယူမည်။ အချို့က၎င်းကိုအလုပ်အကိုင်ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ အချို့ကမူတရုတ်နိုင်ငံမှစက်မှုလုပ်ငန်းများသူလျှိုလုပ်ခြင်းအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်: မကြာမီ SUVs များအတွက်ကြော်ငြာပိတ်ပင်ထား? - ဗီဒီယို
ညစ်ညမ်းသောယာဉ်များကိုမြှင့်တင်ရန်ကြော်ငြာကိုပိတ်ပင်ထားပါသလား။ မတ်လ ၂ ရက်၊ တနင်္လာနေ့တွင်အမျိုးသားညီလာခံအရရုပ်မြင်သံကြားဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးရန်လက်ထောက်ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ ဦး ကတောင်းဆိုသည်။
RTL ၏သတင်းစာကို ၂၀၁၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်၊ RTL ၏အယ်ဒီတာများနှင့် RTL.fr. တွင်ရှာဖွေပါ။ ဤဗွီဒီယိုသည် https://www.youtube.com/watch?v=IAuKL28L2020Ps တွင်ပထမဆုံးပေါ်ခဲ့သည်
သမ္မတဘုရ်ှ ၂၀၂၂ -“ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်ပါ” ဟု RTL မှ Montebourg ကပြောကြားခဲ့သည်။
RTL EST ည့်သည် - စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဟောင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပြီးနိုင်ငံရေးသို့ပြန်ရန်မရည်ရွယ်သည်။ သူက“ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။
RTL သတင်းစာကို RTL ၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှ ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်၊ RTL.fr. တွင်ရှာပါ။ ဒီဗီဒီယိုကို https://www.youtube.com/watch?v=c28VT2020NKdRnA တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်
123 ... 213 လာမယ့်